अब आउँछ संविधान: प्रोफेसर एवम् नेपालविज्ञ -एसडी मुनी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:४९ English
अब आउँछ संविधान: प्रोफेसर एवम् नेपालविज्ञ -एसडी मुनी
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नयाँदिल्लीका प्रोफेसर एवम् नेपालविज्ञ एसडी मुनी नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको हेर्न चाहन्छन् । शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताको वातावरण बन्दै गएकाले जेठ १४ भित्रै नेपालले नयाँ संविधान पाउने कुरामा उनी ढुक्क छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न तयार भएकोले पनि नेपालमा अब शान्ति र संविधानको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । नेपालमा राजसंस्था फर्काउन भारतले नचाहेको बताउने मुनी अहिले नेपाल-भारत सम्बन्ध विषयक सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा काठमाडौंमा छन् । उनीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीका प्रमुख अंश :
जेठ १४ भित्र संविधान आउला ?
आउँछ, निश्चिन्त हुनुस् । कस्तो र कुन स्वरूपको संविधान आउँछ भन्नेमा बहस हुन सक्ला । तर, अब संविधान रोक्न सक्ने हिम्मत कोहीसँग पनि छैन ।
शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएला ?
टुङ्गिन्छ, टुङ्गिने दिशामा नेपाल अगाडि बढिसक्यो । दलहरूबीच सहमति पनि भइसकेको छ । सातबुँदे सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने निर्णय
भइसकेकोले सानातिना विवादले अब यो प्रक्रिया रोकिँदैन ।
बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधानको काम पूरा होला ?
पूरा हुन्छ, म पूर्ण विश्वस्त छु । शान्ति र संविधान निर्माणको काम प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुन्छ । अहिले तत्काल सरकार परिवर्तनको कुरा गर्नुभन्दा पनि समयको पावन्दीलाई बुझेर शान्ति र संविधानलाई अगाडि बढाएर जानुको विकल्प छैन । त्यसैले सरकार परिवर्तन गर्न अहिले दलहरू लाग्नुहुन्न । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएपछि र संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न दलहरू लाग्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा ?
शान्ति र संविधान निर्माणको काम सकिएपछि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर प्रचण्डले नै मसँग भनिसकेका छन् । त्यसैले अब चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ । काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले केही असर पार्नसक्छ । तर, त्यो पनि मिल्छ । काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नसक्ला ?
किन नसक्नु, माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेपछि असम्भव के छ ?
माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देख्नुहुन्न ?
अहिले मैले बुझेअनुसार प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्न तयार देखिनुहुन्न । बाबुरामजीलाई नै उहाँ समर्थन गरिरहनुभएको छ । बाबुरामपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर उहाँ चुनावमा जाने पक्षमा म देख्छु । त्यसपछि प्रचण्डजी मुलुक राष्ट्रपतीय पद्धतिमा गए राष्ट्रपति बन्नुहोला, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा गए प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । तर, चुनावपछि प्रचण्डजी नै बन्नुहुन्छ ।
तपाईंको प्रचण्डजीसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध छ भन्छन् नि ?
मेरो सबैसँग सम्बन्ध छ । म नेपाल आउँदा सबैसँगै भेट्ने गर्छु, प्रचण्डसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध छ । शान्तिप्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि प्रचण्डले निर्वाह गरेको भूमिकाको म प्रशंसा गर्छु ।
सङ्घीयतामा धेरै जटिलता छ, कसरी संविधान जारी होला त ?
नेपालमा सङ्घीयता स्वीकार नगरेको संविधान जारी हुनै सक्दैन । सङ्घीयतालाई स्वीकारे सङ्घीयताको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयलाई पछि टुङ्ग्याउने गरी आधा अधुरो संविधान जारी हुन सक्छ । संविधान जारी भएपछि निर्वाचित हुने संसद्ले बाँकी विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछ । पहिला सङ्घीयता स्वीकार गर्नुस्, बाँकी विषय पछि छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।
सङ्घीयताबिनाको अपुरो संविधान जारी हुन दिन्नौँ भनेर स्वयम् दलहरूले नै बताइरहेका छन् नि ?
संविधान निर्माण हुनासाथ अन्तिम हुँदैन, जनताको हितको पक्षमा संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । भारतमा पनि त पचासौँपटक संविधान संशोधन भएको छ नि । पहिला सङ्घीयता स्वीकारेको संविधान बन्नुपर्‍यो, त्यसपछि कस्तो सङ्घीयता, कति प्रदेश भन्ने कुरा मिलाउँदै लान सकिन्छ । संविधान जारी भएपछि सङ्घीयतामा रहेको विवाद पनि मिलाउँदै जान सकिन्छ । पहिला संविधान त जारी गर्नुपर्‍यो नि ।
नेपालमा राजतन्त्र फेरि फर्किने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा राजतन्त्र अब कहिल्यै आउँदैन । नेपालमा राजतन्त्र ब्युँताउने कुरामा भारतको सरकार, राजनीतिक दल र जनता कसैको पनि समर्थन रहँदैन । राजतन्त्र फर्काउने प्रयास सफल हुनै सक्दैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतीय नेताहरूले समेत कहिल्यै पनि राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गरेका छैनन् ।
तर, राजालाई भारतको सहयोग छ भन्छन् नि त ?
नेपालमा लोकतन्त्रलाई समर्थन छ, अहिले भारतले ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना मैले देखेको छैन । भारतलाई मैले जसरी बुझेको-जानेको छु कोही पनि ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैन ।
तर, विभिन्न नाममा उनी सक्रिय हुन खोज्दै छन् त ?
शान्ति र संविधान निर्माणमा देखिएको अन्योलको फाइदा उठाउन उनी सक्रिय भएका हुन् । दलहरूले शान्ति र संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरे अन्योलको फाइदा लिन खोज्नेहरू आफैं समाप्त भएर जान्छन् । नेपालको अन्योलबाट अल्ट्रा राइटिस्ट र लेफ्टिस्टले फाइदा उठाउने प्रयास गरेका छन् । ‘राजा’को सक्रियता र माओवादीमा आएको फुट पनि त्यसको उदाहरण हो ।
तर, नेपालमा त भारतीय भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ नि ?
नेपालका नेताहरूले आफ्नो शक्ति देखाउन भारतको समर्थनको कुरा गर्ने गरेका हुन् । भारतलाई नेपालमा के गर्ने भन्दा पनि अमेरिका, चीन र पाकिस्तानको विषयमा के गर्ने भन्नेमा छलफल गर्दैमा फुर्सद छैन । भारतको चाहना नेपालमा शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान स्थायित्व, विकास र लोकतन्त्र मात्रै हो ।
२२ चैत्र २०६८, बुधबार १९:३४ मा प्रकाशित